Izimoto ezi-Intelligent Multi-function Vehicle SY ezihlakaniphile zokulungiswa kwemigwaqo zihlanganiswa ngokuhlanganyela yi-Hebei Special Purpose Automobile Manufacturing Co., Ltd. kanye ne-Space Robot Research Room yunivesithi eyaziwayo eBeijing iminyaka emithathu. Le moto ihlanganisa imisebenzi yokugaya okuhlakaniphile, ukutakula, ukujova uwoyela, ukugcwalisa nokugingqika kube munye, okungabona kahle nangokufanelekile ukugcinwa nokulungiswa kwesikwele, imigodi eyindilinga ne-manhole co ...
CL uchungechunge uhlobo olujwayelekile lwe-Asphalt Mixing plant CL uchungechunge uhlobo olujwayelekile lwesitshalo sokuxuba, uhlobo olujwayelekile lwesitshalo sokuxuba i-Ca-long asphalt, yingxenye ejwayelekile yolunye uchungechunge lwesitshalo, izici zalo zobuchwepheshe ziyizici ezivamile zolunye uchungechunge lwesitshalo. I-Beijing Ca-Long inamathela ekuqokeni kochwepheshe, ukukhiqizwa okulinganiselwe, izinsizakalo zokunemba, Izinhlobo ezahlukahlukene zezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. ICa-Long izuze imodeli yezitshalo enkulu kunazo zonke emhlabeni, ehola ...
I-CLJ uchungechunge lwe-Full Container uhlobo lwe-Asphalt Mixing Plant Full Container-type Asphalt Plant, eyenziwe ngokuhlanganyela yinkampani yethu neChangAn University, isixazululo esiyingqayizivele enkingeni yebhodlela lezindleko zokuthumela eziphakeme ngenxa yevolumu enkulu yezitshalo ezinamandla. Lesi sitshalo sisebenzisa isakhiwo sohlobo lwesitsha, wonke amayunithi nezinto ezihlanganisiwe ziqukethe iziqukathi ezijwayelekile, kwakheka amayunithi amaningi esitsha, angafakwa ngokukhululekile nezinye iziqukathi zokuhambisa zokuhamba, eqaphela ukuthunyelwa okuphansi ...
Okuzenzele yi-Beijing Ca-Long, i-CLR series Recycled Asphalt Plant (RAP) ingasebenzisa i-asphalt eshisiwe esetshenzisiwe ukukhiqiza i-asphalt entsha ngephesenti lama-max. 60%. Idizayini yayo yethula ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bakwamanye amazwe futhi ibhekela izimo zamanje zomgwaqo waseChina. Ukusebenza kwayo kufinyelela ezingeni eliphakeme lamazwe omhlaba. Izici Eziyinhloko ■ Ukuhlelwa kokuhlelwa okuhlukahlukene, kungaxhunyaniswa ngokuphelele nezinhlobo ezahlukahlukene zesitshalo sokuxuba impahla eluhlaza ■ Isigubhu sesayensi nesithuthukile ...
I-CLUR series RAP integrated Plant RAP integrated Plant yakhelwe ngobuchule ngesisekelo sokumunca ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu base-Europe futhi ngokweqiniso lase China. Yenzelwe futhi yacwaningwa ngo-2010 futhi yangena emakethe ngo-2012, ngobuchwepheshe obuphambili kunazo zonke eChina ■ Idizayini edidiyelwe yohlelo, isakhiwo esihlanganisiwe. Ngokuya ngezimpawu zempahla eluhlaza kanye nezinto ezenziwe kabusha, ukwakheka okusha kanye nokwakheka kohlelo kususa ukukhubazeka kokuvuselelwa kwendabuko ...
Uchungechunge lwe-CLH Isitshalo sokuxuba se-Asphalt esi-Eco-friendly I-Eco-friendly Asphalt Mixing plant, iminyaka emine yocwaningo olunzima nentuthuko, izinga eliphakeme lamazwe omhlaba, ukufezekisa umnotho ohlanzekile, onokuthula, wokuphinda usebenzise kabusha. "Okuhlaza, ukusabalalisa, ukusebenza kahle okuphezulu" kungumqondo wokuvikelwa kwemvelo weCa-Long, ngokuya ngamazinga aphezulu wezidingo zokuvikelwa kwemvelo, iCa-Long isebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukile nezindlela zokondla, ukukhipha, ukomisa, ukuhlolwa nokulinganisa, i-op .. .
I-CLY chungechunge le-Mobile Asphalt Mixing Plant Ca-long Mobile Asphalt Mixing Plant isizukulwane esisha semikhiqizo yochungechunge lweselula ngokuzimela eyenziwe yiCa-Long, engabona ukufuduswa kwesitshalo seselula nokufakwa okuzimele, futhi ivumelane nezimo zesimo sokusebenza sokufuduswa kaningi, ngokushesha ukufakwa nokukhishwa ngokushesha esizeni. Ikakhulu ezimakethe zaphesheya kanye nokulungiswa okuncane kwasekhaya, imakethe yesondlo. ■ Yamukela idizayini edidiyelwe, ukusebenziseka kokuhlanganiswa. I ...
Indawo Yokuxuba Ukhonkolo - CLS
Uchungechunge lwe-CLS Plant Planting Mixing Plant CLS series Planting Mixing Plant ilungele ukhonkolo ongaphambi kokuhweba wasemadolobheni, imigwaqo namabhuloho, izakhiwo, ubunjiniyela bamanzi, amandla kagesi, amachweba, izikhumulo zezindiza kanye namanye amaphrojekthi amakhulu wokwakhiwa kwengqalasizinda. Inezinzuzo ezisobala zokuzinza okuhle, ukusebenza okuqinile nezinga eliphakeme lobuhlakani. Umklamo wesakhiwo sokuhlanganiswa kukakhonkolo omude we-Ca ungokwesayensi, kunengqondo, izinto eziqinile, kusebenza kahle, ukuvikelwa kwemvelo, ngokusho kwe ...
Indawo Yokuxuba Inhlabathi - CLW
Isitshalo sokuxuba inhlabathi / usimende se-CLW uchungechunge lwesitshalo esixubanisa inhlabathi / usimende lufanele amaphrojekthi wokwakhiwa kwengqalasizinda njenge-Expressway, umgwaqo kanye nesikhumulo sezindiza. Inezici ezilandelayo: izinto ezinhle zokuzivumelanisa nezimo, imithamo eminingi, ukwakheka okuhlangene nokuhlelwa okunengqondo, ukuthembeka okuphezulu, njll. Amandla avela ku-350t / h kuye ku-600t / h. ■ Kuhlome ngohlelo lokuxuba ukusebenza okuphezulu, ukuxubana okufanayo, ukusebenza okuzinzile, ukusebenza kahle kokukhiqiza ■ Kungakwazi ukuxuba izinhlobo ezahlukahlukene zenhlanganisela ezinzile ...
Iphampu Elikhonjiwe Elikhonjisiwe - CLT
Izici eziyinhloko ■ Imikhiqizo emibili yochungechunge iyatholakala: imoto kagesi nenjini kawoyela kadizili. ■ Abaphakeli abadumile emhlabeni baqinisekisa ukuzinza nokwethembeka ■ Uhlelo lokusabalalisa i-valve oluthuthukisiwe, indandatho yokugeleza ezintantayo inganxephezela isikhala esigugile ngokuzenzakalela ngokufakwa uphawu okuhle nokugcinwa kulula ■ Ngosimende oqinisiwe wokuxuba inhlabathi enikwe amandla uhlelo olubanzi lwe-hydraulic, ithembisa ukusebenza kahle kwamandla amakhulu ingcindezi ephezulu, elungele zombili izakhiwo ezinokukhipha okuphansi kanye ne-high-outpu ...
Ukudilizwa kwemfucumfucu ukusetshenziswa kabusha kwesitshalo esiphelele Ukuqedwa kokulahlwa kwemfucuza okusetshenzisiwe kabusha isitshalo esiphelele, ikakhulukazi sokwakhiwa kwamadolobha, amabhlogo kakhonkolo aqinisiwe, ukhonkolo ocacile, izitini namabhulokhi wamapulangwe, izinkuni nezinye izinto ezikhiqizwa ukudilizwa kwezindlu ziphukile, zihlungwa, zihlolwe, zikhonkolo futhi isitini siba yisibalo nesihlabathi, ukwenza ukhonkolo noma isitini esingenakubhaka, ipulasitiki, izinkuni, insimbi zihlelwa ukuze zisetshenziswe kabusha, zibone udoti kuzinsizakusebenza ezitholakalayo.
I-Crawler Mobile Crusher Crawler uhlobo lwesiteshi sokuchoboza iselula ngokuphelele lusetshenziswa ekwelapheni imfucuza yokwakhiwa, ukukhiqizwa kwamatshe, izimayini neminye imikhakha. Isiteshi esichoboza iselula sisebenzisa ukwakheka okusha futhi okuguqukayo. Isiteshi sokuchoboza sine-generator yaso, engabona ukuhamba okusheshayo kwesiza esisebenzayo futhi ilungele ukusebenza kwesiza sokwakha ukubhidliza izakhiwo. Imoto isebenzisa isilawuli kude, esingabona ukusebenza okukude ■ Ukucushwa komshini okuthuthukile okuthuthukile, i-stabl ...